Company Profile-Air nyo, HEPA nyo, Air nyo emeputa, ustjá ikuku nyo
Akụkụ Robotic agụụ Cleaner
Ihe nzacha nke Vacuum
Top Emeputa N'ihi Air Myọcha
>lọ>gbasara Anyị>Nkọwapụta Ụlọ ọrụ
Shanghai Sffiltech Co., Ltd. guzosie ike na 1996, ekpuchi a n'ala ebe 20,000 square maters, na anyị bụ ndị na-eduga emeputa nke gburugburu ebe obibi-enyi na enyi ihe, tumadi ikuku filtration na ọcha ngwaahịa. Maka ngwa ahia, ulo oru na ngwa oru. Sffiltech nwere 100,000 ọkwa ọcha ogbako, na elu na akpaaka Obere-pleat, clapboard ikuku nyo mmepụta akara, na Switzerland dị mbuaha infusion igwe, akpaka enweghị nkebi njikọ infusion igwe na ndị ọzọ ọkachamara ikuku nyo n'ichepụta ngwá, na anyị na osisi na-onwem na mbụ-na klas Igwe ule Metone. Anyị na-asambodo ISO9001-2000 quality management usoro, na ISO14001-2004 gburugburu ebe obibi mma usoro. Ntughari anyi n’aho kariri $ 50 million US.
Na Sffiltech, anyị na-agba mbọ na-enye ndị ahịa na aire nzacha nke magburu onwe imewe na mma, nakwa dị ka nke mbụ-ọnụego mgbe-ire ọrụ.
Anyị ngwaahịa na ọtụtụ-eji agba ịgba ụlọ ndò, ulo oru mkpuchi akụrụngwa, Hi-tech ngwá electronic, nkenke ngwá, bio-pharmaceuticals, nri ọcha, nri na ventilashion na ntụ oyi usoro na ndị ọzọ ọrụ dị ka nke ọma.
Ebumnuche anyị bụ "Ndị Ahịa Na-echekwa, Ogo Mbụ na Ime Ihe n'Eziokwu" iji wuo akara na ọrụ mbụ.
Shanghai Sffiltech Co., Ltd. anatawo ezi aha n'etiti ndi ahia ya site na Europe, North America, South America, Africa, Middle East na mpaghara ozo nke uwa. Anyị bụ ndị mmekọ nke ọtụtụ ụlọ ọrụ Fortune Global 500, dị ka GM.
Nabata ndị ahịa na-abịa ịkwado azụmahịa na ọrụ maka gburugburu ebe na-enwu gbaa, dị ọhụrụ na eke
Okwu ： Room NO.5004, North-Buliding, New Cangyuan Tech Building, NO.951 Jianchuan Road, Minhang Disctrict, Shanghai China
Adreesị ：lọ Ọrụ ： 201, No.3 Building, No.3255 uzo Shengang Road, songjiang district.shanghai.
Kpọọ anyị ：0086 21 54715167
Skype ：Obinna 8037